စား/သုံး သူပြည်သူလူထုတွေဖက်က ဘယ်သူရပ် မှာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » စား/သုံး သူပြည်သူလူထုတွေဖက်က ဘယ်သူရပ် မှာလဲ
စား/သုံး သူပြည်သူလူထုတွေဖက်က ဘယ်သူရပ် မှာလဲ
- Zato Ichi
Posted by Zato Ichi on Nov 18, 2012 in Myanmar Gazette, Opinion - Op-ed |2comments
post from: http://presidentutheinsein.blogspot.com/2012/11/blog-post_17.html
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက အချိန်ရလို့ online ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကို ဖတ်ခဲ့တယ်၊ သတင်းစာတွေ ရောင်စုံနဲ့ ထုတ်နေတာတွေ့ လို့ ဝမ်းသာပါတယ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ထုတ်သတင်းစာ ကို ဖတ်မိတာဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာသတင်းစာကိုအရင်တုံးက ဖတ်ခဲပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ တော့ အစိုးရက ထုတ်တဲ့သတင်းတွေက အရင်ကလို အယ်ဒီတာ့အာဘော်လို အစိုးရကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့ ၀ါဒဖြန့် ချီရေးသတင်း တွေနဲနဲပါးပါး လျော့နည်းလာတာတွေ့ ရလို့ အချိန်ရရင်တော့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်တွေ တွေ့ ခဲ့ရင် ဖတ်ပါတယ်၊
စာမျက်နှာ ၈ မှာပါတဲ့ အောက်က သတင်းတပုဒ် ကိုဖတ်လိုက်တော့ တော်တော်တုန်လှုပ်မိ ပါတယ်၊
သတင်းခေါင်းစဉ်ကို ပေါ့ပေါတန်တန်ဖတ်လိုက်ရင် သုံးစွဲသူတွေ ရဲ့ အကျိုး အတွက် စီးနင်းခကို တစ်ပြေး ညီသတ်မှတ်ပေးတယ်လို့ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ယူဆလိုက်မှာပဲ၊
ဒါပေမဲ့ နဲနဲ စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဒီခေတ် စီးပွားရေး စနစ်မှာဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ နဲ့ ဖွဲ့ ထားတဲ့ အဖွဲ့ တစ်ခုက သုံးစွဲသူတွေရဲ့မျက်နှာမှ မထောက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်တွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ဆုံဖြတ်ချက်တွေ သတ်မှတ်ချက်တွေကို တဖက်သတ်ပြောင်ပြောင် တင်းတင်းလုပ်တာကို သတင်းအနေနဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ က ပူးပေါင်းပြီး ဈေးနှုန်းကိုသူတို့ အကြိုက် သတ်မှတ် တာကို (price fixing) ဈေးနှုန်းကိုညှိပြီး မလုပ်နိုင်အောင်ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိပါတယ်၊ ဥပဒေတွေရှိ နေတောင်မှ လုပ်ငန်းရှင်တွေ လူမသိအောင်လျှိ့ ဝှက်ပြီး ဈေးကို ညှိကြလို့ အစိုးရတွေက စုံစမ်း အရေးယူ ကြပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ စား/သုံးသူတွေကို ကာကွယ်တဲ့ အေဂျင်စီတွေ (consumer protection agency) ဥပဒေ အရ ထားရှိပါတယ်၊
၀ယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအား ပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေရဲ့ ကာလပေါက်ဈေးကို ဖြစ်စေ တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်နဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးကွက်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ဟာ အပြိုင်အဆိုင် သူတို့ ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင်ဈေးနှုန်းသက်သာသည်ထက်သက်သာအောင် စားသုံးသူ တွေကို စွဲဆောင်ကြရပါတယ်၊ အပြိုင်အဆိုင်ရှိမှ စားသုံးသူတွေအသုံးပြုသူတွေ အတွက် အကျိုး ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်၊
အခုတော့ မုံရွာမြို့ က ခေတ်မှီရှပ်ပြေးအမြန်ယာဉ် လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပေါင်းပြီး သူတို့ လိုချင်တဲ့ဈေးကို သူတို့ ကိုယ် တိုင်ညှိ ပြီး တောင်းချင်သလိုတောင်းနိုင်တယ်လို့ ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၊ ခရီးသည်တွေ ကို ဒီဈေးပေးနိုင်မှ စီး မပေးနိုင်ရင်မစီးကြနဲ့ တခြား ရေယာဉ်အသင်းကို သွားလည်း ဒီဈေးပဲ လို့ ဈေးကိုင် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၊
ဒီနေရာမှာ မေးချင်စရာတခုရှိပါတယ်၊ တာဝန်ရှိသူတွေက လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖက်ကရပ်တည်ပေးတော့
အခုကိစ္စ မုံရွာမြို့က ရေယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဗြောင်ဈေးညှိ တာ က မြန်မာတစ်ပြည်လုံးနဲ့စာလိုက်ရင် အလွန်သေးငယ်တဲ့ အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းသာဖြစ်တယ်၊
တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ဘယ်လောက်များ ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ စာရင်းမရှိလို့ မသိနိုင်ပါ၊
ဒါပေမဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအားလုံး အခုလိုပဲ လုပ်ငန်းရှင်အသင်းတွေက အချင်းချင်း ဈေးနှုန်းကို ညှိပြီး သတ်မှတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့ တစ်ခုခု တော့ လုပ်သင့် ပြီဖြစ်ပါတယ်၊ အများပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်နစ်နာတယ်ဆိုတာ လည်းစာရင်း မရှိ လို့မသိ နိုင်ပါ၊
စားသုံးသူပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို မသမာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ရန်က အကာအကွယ် ပေးနိုင် ဖို့ နိုင်ငံတော်အ စိုးရရဲ့ ဦးစီးဌာန တစ်ခုလိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊
About Zato Ichi
Zato Ichi has written4post in this Website..
View all posts by Zato Ichi →
တရားမျှတမှု့ ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်မှု့ နဲ့ အများပြည်သူအကျိုး မထိခိုက်မှု့ အပေါ်အခြေခံတဲ့ ဥပဒေ၊စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ တွေ ရှိလာတဲ့တနေ့မှာ အခွင့်ထူးရသူ အားကြီးသူတွေရဲ့ တဖက်စောင်းနင်း ကိုယ်ကျိုးရှာမှု့တွေကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..။
အခုကတော့ အဲဒီအချက်တွေ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး…။
ဒါထက် မုံရွာ-ကလေးဝ ရိုးရိုးတန်း ၆၀၀၀ ကျပ်ဆိုတာ မများလှဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
နာမည်က တခါမှမကြားဖူးဘူး….. ဘယ်ကာတွန်းက ဇာတ်ကောင်လဲဟင်………….
ပထမပြောချင်တာကတော့ စာသုံးသူ အခွင့်အရေးပေါ့နော်……..
စားသုံးသူ ဆိုတာ ဈေးပေါပီး ပစ္စည်းကောင်းတာကို အမြဲလိုချင်ပါတယ်……
ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် အတူတူပါပဲ…………
ဒါပေမယ့် နေရာတကာ မှာ မဖြစ်နိုင်ဖူးဆိုတာတော့ စာရေးသူ သတိထားမိစေချင်ပါတယ်……
မတရားမှူတွေရှိတုန်းပဲ… အနိုင်ကျင့်တာတွေ ရှိတုန်းပဲ….. ဂျပန်ကာတွန်းရင်းနှီးတဲ့သူလို့ ထင်လို့အကောင်းဆုံး ဥပမာတခုပြောမယ်…..
Death Note တော့သိတယ်ဟုတ်…..
မကောင်းတဲ့သူတွေ ကို လိုက်သတ်ရင်း ကိုယ်ကိုတိုင် မကောင်းဆိုးဝါးကြီး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတဲ့သူလေ….
စာအုပ်တအုပ်နဲ့လူလိုက်သတ်တာ……..
အဲ့လို ဇာတ်ကားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြလဲဆိုရင် ဂျပန်လို အင်မတန်မှ စည်းကမ်း ပြည့်ဝတယ်လို့ယူဆရတဲ့ နိုင်ငံမှာတောင် မတရားမှူဆိုတာ ရှိသေးတယ်လို့ ပြနေတာပါ…….
စားသုံးသူ တခုထဲ Right ရှိတာ မဟုတ်ပါဖူး…. ရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေလည်း Right ရှိပါတယ်……….
သူတို့ က ဈေးညှိပီး ဈေးအဆမတန်တောင်းတယ်လို့ထင်ရင် မစီးနဲ့ ပေါ့………..
ဒါစီးပွားရေးလုပ်နေတာ… လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှူလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဖူး……
သတင်းစာထဲရေးလေ…. ဂျာနယ်ကိုရင်ဖွင့်… တက်နိုင်ရင် ဆန္ဒပြ………
သူတို့ဘာလို့ ညှိလဲ အဖြေကရှင်းပါတယ်……
အင်္ဂလိပ်လက်ထပ်က သဘောင်္ပိုင်ရှင်ကြီး ဦးနာအုပ် ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ဖူးပါတယ်…..
သူနာမည် မှားရေးမိရင် ပြင်ပေးကြပါနော်…. ဇာတ်လမ်းလေးပဲမှတ်မိလို့ ပါ…..
အင်္ဂလိပ်ရေကြောင်းနဲ့ ဈေးကွက် အပြိုင်လုရင်း ဈေးတွေ ပြိုင်လျော့ရင်း နောက်ဆုံး သူ့ ဘ၀ပါ လုံးပါးပါးသွားတယ်လေ……..
အဲ့လို ဥပမာမျိုးတွေရှိလေတော့ စီးပွားရေးသမားတွေလဲ မြတ်မှ လုပ်တဲ့သူတွေပဲ……
ရေယာဉ်တခု ထောင်ပီဟေ့ ဆိုရင် မောင်းတဲ့သူရှိမယ်…. ပြင်တဲ့သူရှိမယ်….. စပယ်ယာရှိမယ်….
ကုန်တင်ကုန်ချသမားရှိမယ်…. စာရင်းအင်းကိုင်တဲ့သူရှိမယ်…. စသဖြင့် အဲ့ဒါကို မှီခိုနေတဲ့ လူတွေ ဒုနဲ့ ဒေးပါ……
တကယ်လို့စာရေးသူ ပြောသလို စီးပွားရေး သမားတွေ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးလျော့လို ယာဉ်ကြောင်း သုံး ကြောင်း မှာ နှစ်ကြောင်း ကပြုတ် ကျန်တဲ့ တကြောင်း ကဗိုလ်စွဲ….
ပထမဆုံး ပြုတ်တဲ့ ယာဉ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းက အလုပ်သမားလူတန်းစား ဒုတ်ခရောက်မယ်…..
နောက်ပိုင်း နိုင်တဲ့ ယာဉ်ကြောင်းက ဘောစိက ကြိုက်တဲ့ဈေးသတ်မှတ်မယ်…..
သူမှာ ယှဉ်မယ့်သူမှ မရှိတော့တာ……
ရေကြောင်း တခုလုံးကို ချယ်လှယ်မယ်…….
ဒါဆို ဘယ်သူ နစ်နာမလဲ……
အစိုးရဆိုတာ တခါတလေ တရုတ်ကားတွေထဲက မိုးနတ်မင်းလို့ ပါ…..
လူတိုင်းကတော့ မိုးနတ်မင်း ကယ်တော်မူကြပါလို့ အော်နေတာပဲ…..
မိုးနတ်မင်းကတော့ လူတိုင်း မကယ်နိုင်ပါဖူး…………
တခါတလေ မိုးနတ်မင်း ကို မစောင့်ပါနဲ့ ………………………
အစိုးရက ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတောင် ကျေနပ်လောက်တဲ့ လစာမပေးနိုင်သေးတာ……….
နောက်ထပ် Department တွေ တိုးချဲ့ ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးပါဖူး………….
လာတော့ လာမှာပေါ့နော်… ဒါပေမယ့် ကြာဦးမည်… မျှော် ဆက်ရန်………………